Olee otú iji weghachite Photos si iCloud ndabere File - 2 Ụzọ E Nwere
2 Mfe Ụzọ naghachi Photos si iCloud
"My iPhone (iOS 9) e zuru. Ọ bụ kechioma na m nwere kwadoo m niile photos n'ime iCloud. Ugbu a, m mkpa iji weghachite foto site na iCloud ndabere faịlụ. Dị ụzọ ọ bụla na-agbake foto site na iCloud ndabere faịlụ ebe m nwere ike ọ bụghị ịhụ preview photos na iCloud ndabere faịlụ? " - Kevin
N'agbanyeghị ihe, ma ọ bụrụ na ị na kwadoo foto gị na-iCloud, mgbe ahụ, i nwere ike naghachi ha si iCloud ndabere faịlụ. E nwere ihu ọma 2 ụzọ iji weghachite foto site na iCloud ndabere faịlụ. Ị ga-ahọrọ onye nke ahụ dị mma maka gị.
Ngwọta 1. Naghachi Photos si iCloud na na kọmputa gị (adịghị achọ iPhone, iPad ma ọ bụ iPod) Ngwọta 2. Weghachi Photos si iCloud gị iOS ngwaọrụ (ị ga-enwe ihe iOS ngwaọrụ) Nchọpụta nsogbu maka otú iji weghachite foto site na iCloud
Ngwọta 1. Naghachi Photos si iCloud na na kọmputa gị
N'ihi na ndị mmadụ na-enweghịzi ha iPhone, iPod ma ọ bụ iPad, ma ọ bụ ndị nwere a mebiri emebi iOS ngwaọrụ, ma ọ bụ ndị dị njikere okporo mmiri ahụ iOS ngwaọrụ maka ihe gam akporo ngwaọrụ, mgbe ahụ, ha kwesịrị ịgbalị Ngwọta 1, n'ihi na otú a na-adịghị achọ ihe ọ bụla iOS ngwaọrụ, ma-enyere gị aka weghachite photos kpọmkwem site iCloud ndabere faịlụ ka kọmputa. Ihe niile ị chọrọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery).
Nzọụkwụ 1 Wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị. Ma Windows na Mac nsụgharị dị maka iOS 9 ngwaọrụ 'ndabere faịlụ. Download nri onye dị ka sistemụ arụmọrụ gị na kọmputa. Ẹkedori ya na pịa naputa site na iCloud ndabere File.
Nzọụkwụ 2 Download iCloud ndabere faịlụ gị mkpa iOS ngwaọrụ
Gị banye iCloud akaụntụ. Nke a na usoro ga-mgbe na-echeta ma ọ bụ na-anakọta gị iCloud ozi akaụntụ. Na mgbe ahụ gị niile iCloud ndabere faịlụ ga-egosipụta ebe a. Họrọ onye na e dere foto na ị chọrọ iji weghachite na ibudata. Na mmapụta window, ịzọpụta oge ibudata iCloud ndabere faịlụ, ị ga-ahọrọ ibudata foto site na Igwefoto Roll na App Photos (photos ebudatara site ọzọ égwu).
Nzọụkwụ 3 weghachite foto site na iCloud
Pịa iṅomi bọtịnụ na omume na-iṅomi iCloud ndabere faịlụ maka foto gị mkpa. Ọ pụrụ ewe gị a nkeji ole na ole rụchaa Doppler bụrụ na i nwere ọtụtụ puku foto kwadoo ka iCloud ndabere faịlụ. Mgbe iṅomi dị n'elu, pịa Igwefoto Roll na App Photos karị ka ịhụchalụ a niile hụrụ photos. Ego ndị dị gị mkpa ma pịa Naghachi na ala n'aka nri ịzọpụta ndị a foto site na iCloud ndabere faịlụ gị na kọmputa.
Cheta na: Mgbe ewepụta foto ndị si iCloud ndabere faịlụ, i nwere ike ịgbalị iTunes ma ọ bụ Wondershare TunesGo na-etinye foto ndị a gị iOS ngwaọrụ (iOS 9 akwado) ọzọ.
Ngwọta 2. Weghachi Photos si iCloud gị iOS ngwaọrụ (ị ga-enwe ihe iOS ngwaọrụ)
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ọ bụla software naghachi foto site na iCloud ndabere faịlụ, mgbe ahụ, i nwere ike na-amasị iweghachi gị iOS ngwaọrụ site na iCloud ndabere faịlụ nke e dere foto gị. Ọ bụrụ otú ahụ, lelee na-esonụ:
Cheta na: tupu Iweghachi foto site na iCloud ndabere faịlụ gị iOS ngwaọrụ, ị kwesịrị ịma na ihe niile na gị iOS ngwaọrụ ugbu a ga-ehichapu ya. Kama nke ahụ, agadi ntọala na foto na igwefoto Roll ozugbo kwadoo ka iCloud faịlụ a ga-eweghachi gị iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ dị mkpa data, m na-eche na ị ga-mma na-agbalị ngwọta 1, ma ọ bụ jiri Wondershare TunesGo nkwado ndabere na mpaghara ya na mgbe na-eme mgbake.
Nzọụkwụ 1 Melite gị iOS ka ọhụrụ iOS 9 version
Na gị iOS ngwaọrụ, pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Software Update. Ọ bụrụ na gị iOS abụghị ọhụrụ iOS 9 version, dịnụ update bụ ebe a. Pịa Wụnye Ugbu a na soro ntuziaka ka wụnye ya na gị iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2 Tulee ma iCloud ndabere faịlụ dị ma ọ bụ
Pịa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere. Lee anya na ala nke window elele ma tụrụ anya na iCloud ndabere bụ n'ebe ma ọ bụ. N'ozuzu-ekwu okwu, ọ bụrụ na ị na mere nkwado ndabere na mpaghara, ọ bụ n'ebe ahụ.
Nzọụkwụ 3 weghachite foto site na iCloud ndabere faịlụ
Pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala. Na ntọlite ​​nnyemaaka, na-aga Melite ngwaọrụ gị> mgbata Weghachi si a ndabere> Gaa na Họrọ ndabere. Site ndepụta, họrọ tụrụ anya na iCloud ndabere faịlụ iweghachi gị iOS ngwaọrụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na foto niile ị na kwadoo ka iCloud bụ na gị na iOS ngwaọrụ ọzọ.
Nchọpụta nsogbu maka otú iji weghachite foto site na iCloud
Ajụjụ 1: m nwere m iPhone rụziri na mgbe e mesịrị m gbalịrị iji weghachi m iPhone na a 9.5GB iCloud ndabere faịlụ. Otú ọ dị, ọ bụghị na-arụ ọrụ nke ọma. M naanị na-akụkụ nke m photos weghachiri m iPhone. Ndị fọdụrụ dị nnọọ furu efu. Ụfọdụ ngwa ọbụna emeghị weghachi. Azịza: The ụzọ kasị mma izere nsogbu a bụ usingWondershare Dr.Fone maka iOS ike iṅomi ndị iCloud ndabere faịlụ, adịrị foto site na iCloud ndabere faịlụ na-azọpụta ha na kọmputa gị. Ma ọ bụ i nwere ike ịgbalị otú a (bara uru n'ihi na ụfọdụ ndị na-): eji Wall chaja na-anakọta gị iPhone (igbochi iTune mmekọrịta), pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala, weghachi gị iPhone si iCloud ndabere faịlụ, Open Photos ngwa gị iPhone na-ahụ photos nbudata otu-site-otu (adịghị emetụ gị iPhone).
Ajụjụ 2: mgbe m nwara iji weghachi foto site na iCloud m iPhone, m hụrụ na ndị nile photos tụgharịa isi awọ na igwefoto Roll. O yiri ọ bụ na loading usoro, otú ahụ ka m ka ọ mara n'abalị dum. Otú ọ dị, n'ụtụtụ echi ya, foto ndị a ka na-agba ntụ. Azịza: Mgbe ị na-ahụ na niile foto weghachiri eweghachi si iCloud ndabere faịlụ bụ isi awọ, i nwere ike iji enweta ndise otu-site-otu maka sekọnd ole na ole ka ọ na Ibu Ibu n'ụzọ kwesịrị ekwesị .
Ajụjụ 3: m nwụnahụrụ m iPhone, n'ihi ya aghaghị m ịzụta ọzọ. The nsogbu bụ na iCloud ndabere faịlụ bụ oke ibu a ga-eweghachi on ọhụrụ m iPhone. Olee otú m weghachite data, karịsịa photos, kọntaktị, na ozi site na iCloud ndabere faịlụ, otú ahụ ka m ghara ida ha? Apple kwuru na ọ dịghị ihe m nwere ike ime iji nweta iCloud ndabere faịlụ. Azịza: Ọ bụrụ na gị iCloud ndabere faịlụ bụ ibu karịa gị iOS ngwaọrụ ikike, mgbe ahụ, ị nwere ike ghara iweghachi gị iOS ngwaọrụ na ya. Ma i nwere ike ka na-esi ederede ozi, photos, kọntaktị site na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ma ọ bụrụ na ị na-agbalị ọrụ - naputa site na iCloud ndabere faịlụ na Wondershare Dr.Fone maka iOS. Mgbe ahụ, ị nwere ike họrọ chọrọ photos, ederede ozi, na kọntaktị mbupụ ha gị na kọmputa.
Esi nweta iCloud ndabere
Olee otú Naghachi SMS si gam akporo ekwentị mkpanaaka na
Olee otú Naghachi Ndi ana-akpo si gam akporo
Olee otú Naghachi ehichapụ Data si Samsung
Naghachi ehichapụ faịlụ site Samsung Galaxy
Olee otú iji weghachi si iCloud ndabere
A Free Way iji weghachite ozi ederede site na iPhone ndabere
Olee otú Re-download Songs na Hichapụ achọghị Songs si iCloud on iPhone
Ihe Ị Pụrụ Ime na iCloud Issues on iPhone
> Resource> iCloud> Olee otú iji weghachite Photos si iCloud ndabere